Madaxweynaha Jubbaland oo ku dhawaaqay War CULUS, xili uu jiro khilaaf – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Jubbaland oo ku dhawaaqay War CULUS, xili uu jiro khilaaf
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ka qeyb galaya Munaasabada sanad guurada labaad ee Doorashada Madaxweynaha Puntland ayaa ka hadlay xaaladda iyo doorashada dhaceysa 2021.
Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa waxaa uu sheegay in khilaafka ka taagan Arimaha Doorashooyinka ay sal u tahay Arrinta Gobolka Gedo, waxaana Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu baaqay inuu la yimaado aragti lagu xalin karo Xaalada halkaas ka jirta.
Waxaa Madaxweynahu uu intaas ku daray in sharafta Madaxweynaha iyo maqaamka uu joogo ay ka hoosayso in uu isku dhajiyo Gobolka Gedo, iyadoo ay muhiim tahay in gacanta Jubbaland lagu soo celiyo Gobolkaas si ay uga dhaqan gasho Doorasho ay Masuul uu ka yahay Maamulkiisa.
Ugu dambeyn Madaxweynaha Jubbaland ayaa uu tilmaamay in Maamulkiisa ay ka go’an tahay in doorashada dalka ay ku dhacdo jawi wanaagsan dhammaan dhinacyaduna ay tahay in wax walba lagu xaliyo wada hadal si Doorasho la isku raacsan yahay ay dalka uga dhacdo.
Khilaaf xoogan ayaa xiligaan ka taagan doorashada dalka ka dhaceysa, waxaana hadalka Madaxweynaha Jubbaland uu kusii aadaya, iyadoo ay socdaan dadaalo lagu doonayo in xal looga gaaro doorashada dhaceysa.
Wasiir Dubbe “Mowqifka DFS ay ka qaadatay Sucuudiga iyo Qatar waxa uu ahaa mid…